Boorsada Qaboojiyaha ee Qadarka ah ee Bacda Qadada ah oo La -Dhigi karo iyo Sanduuqa Qadada Qaboojiyaha Qaboojiyaha
Waxyaabaha: TPU, TPU iyo suufka dahaaran
Nooca Qaabka: Cad
Astaamaha: Biyo -xireen, dahaaran, Kuleyl
Magaca badeecada: Bacda dahaarka
Isticmaalka: Waxqabadka Bannaanka
OEM/OED: Si diiran ayaa loo soo dhaweeyay
Geedi socodka: cadaadinta kulul
Cabbirka kartoonka: 40*31*35cm/1set
Shaqo: Biyo-la'aan iyo hawo-mareen, oo barafka lagu hayo 48-72 saacadood
Tirada (Cadad) 1 - 100 101 - 500 501- 1000 > 1000
Qiyaasta Waqtiga (maalmo) 15 20 25 In laga wada xaajoodo
Shayga Bacda dahaarka
Waxyaabaha TPU / NBR dahaarka suufka / jiinyeer ciriiri ah
Cabbirka kartoonka 40*35*31cm /1pcs
Midab Cadaan iyo buluug khafiif ah
Tilmaam Biyo -la'aan, qaboojin, dahaaran, kuleyl, la qaadi karo
Function Biyo-la'aan iyo hawo-mareen, oo barafka lagu hayo 48-72 saacadood
Isticmaalka Dalxiiska dibedda, hilib dubista, kaambada, dabbaasha xeebta, kalluumaysiga, kaxaynta, gaadiidka bannaanka fog fog Mobile, caafimaad, iwm
OEM/OED Si Diiran Loogu Soo Dhaweeyey
(L x W x H) 32 × 27 × 37. BBQ, iwm.
Leakproof & sii qabow/diiran
Dibedda waxaa laga sameeyey Nylon Fabric oo ay fududahay in la qallajiyo si loogu kaydiyo. Dahaarka gudaha waxaa laga sameeyaa xariiqa PEVA-da deegaanka-saaxiibtinimo waxaana lagu daboolay xumbo 8mm EPE ah oo loogu talagalay iska-caabbinta kuleylka weyn. Qadadka qiimaha cuntada ugu sarreeya waa biyo u adkaysta oo aan wasakh lahayn gudaha qaboojiyaha dahaaran wuxuu fududeeyaa nadiifinta.
Qaadista & jeebabka dibadda
bacda kuleylinta kuleylka waxay cuntada iyo cabitaanada ka dhigtaa kuwo qabow oo ku filan 6-baako. Gacanta dhinac iyo suunka garabka ayaa fududeynaya in la qaado; waxay leedahay summadii YKK, oo leh dhejis dhejis dheeraad ah.
Naqshad weyn, isku laab laab, oo si fudud loo kaydin karo. Ka sokow loo isticmaalo qaboojiye dhinac dhinac u fiican, sidoo kale waa qalab khafiif ah oo kaamil ah bacda qadada, bacda xerada, bacda kalluumaysiga, boorsada safarka, ugaadhsiga, raad -raaca, baaskiilka, joogitaanka habeenka iyo hawlaha kale ee bannaanka. Ku habboon ragga iyo dumarka labadaba
Hore: Boorsada Jeebka ee Qaadashada Xidhmada Bixinta Xidhmada boorsada cuntada lagu geeyo
Xiga: Boorsada meeldhexaadka ah ee suunka garabka dahaaran ee bacda meeldhexaadka ah ee kuleylka kuleylka leh
Bacda Qaboojiyaha Baabuurka
Cab Bacda meeldhexaadka ah
Bacda Qaboojiyaha Weyn oo Dheeraad ah
Bacaha Qaboojiyaha Weyn